बिग बाश लिग खेलिरहेका छैनन् सन्दिप तर हरेक खेलमा उनकै चर्चा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
बिग बाश लिग खेलिरहेका छैनन् सन्दिप तर हरेक खेलमा उनकै चर्चा
काठमाडौं। सुरुका ४ खेलमा निकै प्रभावशाली प्रदर्शन गरेपछि बिग बाश लिगमा नेपाली खेलाडी सन्दिप लामिछानेको चर्चा बढेको छ । अहिले सन्दिप बंगलादेश प्रिमियर लिग खेल्न बंगलादेशमा छन् र यहाँ उनले सिलेट सिक्सर्सको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । तर, अस्ट्रेलियाको बिग बाश लिगमा उनको टिमका पछिल्ला २ खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि उनलाई ‘हेर्नुपर्ने खेलाडी’को रुपमा राखिएको थियो ।
क्रिकेटसम्बन्धी चर्चित वेबसाइट इएसपिएन क्रिकइन्फोले मेलबर्न स्टार्सको बुधबारको पर्थ सोर्चर्सविरुद्धको खेलमा सन्दिपलाई ‘प्लेयर्स टु वाच’ (हेर्नुपर्ने खेलाडी)को सूचीमा राखेको थियो । यसरी छानिने २ बलरमध्ये सन्दिपसँगै अर्का बलर डिजे ब्राभो थिए । वेबसाइटले आज फेरि सन्दिपलाई हेर्नुपर्ने खेलाडीको सूचीमा राखेको छ ।
मेलबर्न स्टार्सको आज हुने एडिलेड स्ट्राइकर्सविरुद्धको खेलमा पनि इएसपिएनक्रिकइन्फोले सन्दिप र ब्राभोलाई हेर्नुपर्ने हेलाडीको रुपमा राखेको छ । यद्यपि सन्दिप आजको खेल भने अ‍ेल्ने छैनन् ।